Abakhiqizi be-Glass Railing Standoff kanye nabahlinzeki - China Glass Railing Standoff Factory
Izihlanganisi zensimbi ezingenasici ezisetshenziswa phakathi kwengilazi nengilazi
Ukusakazwa kwensimbi kuyinkqubo yesimanje enezimpande zasendulo. Enqubeni yokusakaza yensimbi, ukwakheka kwensimbi kwakhiwa ngokuthela insimbi encibilikisiwe emgodini wesikhunta, lapho ipholile futhi kamuva ikhishwe kusikhunta. Ukusakazwa kwensimbi ngokusobala kuyinqubo yezimboni yokuqala neyaba nomthelela omkhulu emlandweni. Kujwayele ukwenza izinto eziningi zensimbi ezisetshenziswe empilweni yethu yansuku zonke: izingxenye zezimoto, amasondo esitimela, okuthunyelwe kwamalambu, ama-pedals ebhasi lesikole, nokunye okuningi. Futhi, izisekelo zokuphonsa izinsimbi zincike ekusetshenzisweni kabusha kwensimbi njengomthombo ongabizi kakhulu wento eluhlaza, kunciphisa kakhulu insimbi emoshakele engahle iphele ekulahlweni komhlaba.
I-Stainless Standable Glass Standoff eguquguqukayo engenasici yokufakwa kwesitebhisi se-balustrade / ingilazi
INQUBO YOKUPHOSA UKUTSHALWA KWEZIMALI Ekuphoselweni kotshalo-mali, i-wax noma iphethini elifanele le-polymer ligcotshwe ngokungena kudonga oluyinjwayelo. Lapho ukumbozwa kwempahla ekhonjiwe sekuqinile, le nqubo yokudipha iyaphindwa kaningana ukukhulisa ukushuba kokuqina namandla ayo. Lapho ukumboza kokugcina sekwenziwe lukhuni i-wax iyancibilika bese kuthululwa insimbi encibilikisiwe emgodini owenziwe ngephethini le-wax. Lapho insimbi iqina ngaphakathi kwesikhunta, ukukhishwa kwensimbi kususwa ngu-b ...
I-Staircase Handrail System ye-Glass Standoff eguquguqukayo ye-Frameless Glass Railing
Insimbi Engagqwali Ishintsheka I-Balustrade Standoff Yengilazi
I-Wall Mount Engagqwali Ingilazi Yokusayina
Izitebhisi zensimbi ye-Standoff Railing